Teeth Care | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
mahafotsy nify , Teeth Whitening , Nify Whitening entana
Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify
Mahafotsy Teeth Tips
Posts tagged "nify care"
Easy, Lafo Fomba hanazava ny tsikinao
Misy fomba azo antoka mba hahazoana fotsy tsiky? Tsy ny rehetra ao amin'ny tsara indrindra na azo itokisana. Ity lahatsoratra ity dia hanome ny sasany nify tsara amim-pitandremana sy miadana.
Ny dingana voalohany mba fotsy, mamirapiratra nifiny dia tsara, matihanina ny fanadiovana. Dental cleanings dia tokony ho fahazarana, izay fandaharam-potoana tsirairay isaky ny enim-bolana fotoana. Na izany aza, tsy tapaka matihanina fanadiovana ary mora tsy hita fa matetika no rakotry ny ankamaroan'ny karazana nify fiantohana.
SOSO-KEVITRA! Rehefa avy mahafotsy ny nify, tandremo ny zavatra misotro ianareo, na mihinana. Izy ireo no mandray stains sy ny loko mora kokoa izay mety hahatonga discoloration.
Laser Whitening dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra izay afaka mamokatra vokatra haingana. Izany no ho fomba tsara indrindra ny manana ny nify hiverina indray ny voalohany fotsy amin 'ny mety ho. Ny vahaolana dia nisosa bleaching amin'ny nify, Avy eo dia nisy tamin'ny laser no ampiasaina mba hampavitrika. Ny nify dia hatrany amin'ny fara fahakeliny, dimy na enina matoatoa.
Zava-dehibe ny ahitana voankazo sy legioma manta ao amin'ny sakafo, mba hanampy foana ny nify matanjaka sy salama. Sakafo matavy hampitombo ny vintana ny lavadavaka sy ny mety discoloration ny nify. Aza ireo sakafo isan-karazany izy ireo satria manimba ny fahasalamana ny nify. Tokony tsy tapaka ihany koa ny tsy snacking rehefa mikendry ho salama tsiky.
SOSO-KEVITRA! Aza nify-staining zava-pisotro Raha tadiavinao fotsy nify. Ireo karazana zava-pisotro ahitana ny Coke, kafe sy ny dite mainty.
Mila ny ho malina tsara rehefa mihinana na misotro rehefa manana nify whitened. Whitened nify ho mora mandray loko isan-karazany na stains avy amin'ny sakafo sy zava-pisotro. Halaviro ny maizina na ny sakafo sy zava-pisotro staining mandimby anao efa nanana ny nify no whitened. Kafe dia ohatra amin'ny zavatra izay manapotsitra ao an-nify, ary mahatonga ny loko fiovana.
Andramo misotro ny alalan 'ny mololo mba hanampiana ny nify sy ny mifaritra fotsy foana. Nampiasa ny mololo no mahatonga azy tsy dia azo inoana fa ny zava-pisotro no handevona dia voalotoko ny nify. Ny ranon-javatra dia hialana ny nify sy midina ny tenda.
SOSO-KEVITRA! Ny Whitening matihanina mety ho lafo, fa izany angamba no fomba tsara indrindra hanombohana Whitening ny nify. Raha io fomba lafo kokoa, dia manome ny tsara sy haingana kokoa noho ny hafa Whitening traikefa fomba.
Ravin ny mahafotsy nifinao dia mora hita eny rehetra eny, ary koa somary lafo. Ireo ravin miasa amin'ny alalan'ny fanadiovana ambonin'ny stains avy amin'ny nify sy ny akora simika dia tsaboina amin'ny mahafotsy them.Whitening ravin no very vao haingana lazany, satria tsy manome ny tsara indrindra vokatra.
Tena zava-dehibe fa isaky ny mahazo ny nify whitened, taorian'ny sakafo rehetra tsy maintsy miborosy nify. Ambin-tsakafo poti mety hitarika ho amin'ny fitomboana bakteria eny ambonin'ny ny nify. Raha toa ka tsy mamela ny nify mba hanamafy indray ny, ny bakteria mety mahatonga be dia be ny olana, ka ho azo antoka ianao miborosy.
SOSO-KEVITRA! Rehefa ianao no mila ny fotsy tsiky avy hatrany, tokony hitsidika ny mpitsabo nify avy hatrany. Isaky ny miezaka ny hahazo ny fotsy tsiky, mihazakazaka ny mety ho mahatonga loza, fa tsy ny fanaovana ny tsara fiovana.
Tokony handoa izy ireo rehefa misy tsy fahazakana izay Whitening fitsaboana. Mety ho tena mafy ary mety ho fohy ny fotoana, fa mbola maharary. Raha mitranga izany, ho azo antoka hitanao ny mpitsabo nify eo anatrehanao manohy ny fampiasana ny Whitening vokatra. Mba hahafantarany ny momba ny safidy hafa izay tsy vokany eo aminao izany ny nify.
Ny fifohana sigara sy ny nify Whitening tsy miara-miasa. Raha te tsara tarehy fotsy nify, ianao dia mila intsony ny fifohana sigara. Rehefa mandany vola amin'ny fitsaboana Whitening sy hitandrina ny fifohana sigara, dia fandaniam-bola. Izay rehetra asa ny mahafotsy ny nify dia ho very rehefa mifoka.
SOSO-KEVITRA! Alohan'ny manomboka nify Whitening, miresaka amin'ny mpitsabo nify. Raha fantatrareo fa lehibe dia mila nify asa atao any amin'ny hoavy tsy ho ela, mangataka andro ny nify Whitening paika mandra-asa efa vita.
Foana iray mampiasa borosy nify stowed eny izy noho rehefa mihinana vatomamy na zava-mamy hafa. Ireo sakafo dia mety hiraikitra amin'ny nify mora foana, ary afaka manomboka manimba azy ireo. Rehefa avy no nahafinaritra ny mamy, maka fotoana kely na roa mba miborosy nify. Toothpaste dia tsy ilaina raha tsara kirihitra ny nify ary hosasany azy tsara.
Miborosy amin'ny nify Whitening toothpaste. Na dia ireo tsy mba toy ny toothpastes dia heverina toy ny hafa whiteners, dia hanaisotra izay vao haingana stains sy hiaro ny nify amin'ny stains vaovao. Ireo toothpastes ahitana-pahalemem-Marokoroko sy natao tamin'ny silica izay hiasa tsy manimba karazana verinia.
SOSO-KEVITRA! Zava-dehibe ny miborosy, hihy fanorana, ary floss indroa isan'andro, fara fahakeliny. Ny nify fotsy be dia hijanona raha miborosy sy floss Isaky ny manana sakafo na sakafo maivana.
Hosasany ny vavanao rehefa avy misotro na misotro ianareo. Ny nify dia hijanona fotsy raha manana na inona na inona ny fotoana hanadio azy ireo rehefa avy mandevona ny sakafo na ny zava-pisotro. Izany dia hanampy mba tsy stains sy ny lavadavaka.
Mampiasa nify Whitening penina afaka manampy anao mahafotsy ny nify. Na izany aza, zava-dehibe ny mitandrina amin'ny fampiasana azy ireo, satria miasa tahaka ny eau de javel. Mba hahazoana vokatra tsara indrindra avy amin'izany fomba, dia mila mampihatra azy io amim-pitandremana sy tsy overdoing izany.
SOSO-KEVITRA! Ny sasany Whitening toothpastes dia tsy izy rehetra milaza ny tenany ho. Mety hanampy ny mahafotsy ny nify, nefa tsara ampiasaina izay mitohy amin'ireo paikady.
Te ho any amin'ny mpitsabo nify mba haka ny nify nanadio, fara fahakeliny, indroa isan-taona. Angataho ny birao mba hifandray anao momba ny herinandro eo anoloan'ny fanendrena akaiky.
Miresaha amin'ny mpitsabo nify momba ny salama fomba mahafotsy ny nify vao mividy na inona na inona. Ny mpitsabo nify dia afaka milaza aminao izay tsara indrindra eo amin'ny toe-javatra sy hampitandrina anareo momba ny vokany.
SOSO-KEVITRA! Aoreno flossing ao an-regimin. Flossing isan'andro dia manampy mba hanaisotra ny vavanao ny takelaka, izay iray amin'ireo antony mahatonga ny nify discoloration.
Matetika rano fisotro madio dia hanampy anao amin'ny fotsy nify. Rinsing amin'ny rano no fomba tsara mba tsy stains avy appearing.Make izany ho fahazarana mba hisotro rano mandritra ny sakafo sy ny sakafo.
Ny divay sy ny soda dia ny fahavalonao eo amin'ny mikatsaka fotsy nify. Ireo zava-pisotro dia afaka voalotoko na discolor ny nify. Hanoloana azy ireo amin'ny zava-pisotro salama. Raha te-hisotro zava-pisotro ireo ihany, ho azo antoka miborosy nify ianao raha vao araka izay azo atao mba hanalefahana ny staining vokany.
SOSO-KEVITRA! Ny hodi-kazo ny hazo Walnut dia azo ampiasaina mba moramora kirihitra maina ny stains amin'ny nify. Mampiasa izany hodi-kazo tsy tapaka dia afaka hanala izany sy ny mavo stains discoloration matetika hita amin'ny fampiasana paraky, na tsy hisotro zava-pisotro sasany.
Voankazo sy veggies amin'ny fibrous tsy miovaova dia azo ampiasaina mba ho azy kirihitra ny nify. Misy sakafo izay miasa dia broccoli, kaokaombira, karaoty, sy ny karaoty. Miezaha swish ny sakafo dia eo am-bavanao hatao faritra bebe kokoa nanarona.
Mampiditra bebe kokoa dairy zavatra ao an-sakafo. Strong, nify salama dia azo lazaina fa ny sakafo ao amin'ny sakafo toy ny yogurt, ronono sy ny fromazy. Ireo mineraly ihany koa ny hanatsarana ny karazana verinia ao an-nify, izay mahatonga ny nify tsy mora ny sakafo sy ny zavatra hafa izay matetika mahatonga discoloration. Midika izany fa ao anatin'izany ny sakafo toy izany ao amin'ny sakafo dia hanampy anao hanana ny tsiky izay fotsy.
SOSO-KEVITRA! Home fanafody mba hahazoana fotsy nify mirona mba hanana an lafiny–izy ireo indraindray mety hitarika ho amin'ny mora, nivonto ramy izay iharan'ny mandeha ra. Aza misalasala ny hanontany ny mpitsabo nify raha mahatsapa misy ireo olana mpitsabo nify.
Bakteria dia hitombo manodidina ny vavanao rehefa avy mihinana. Raha toa ka tsy mamela ny nify mba hanamafy indray ny, ny bakteria mety mahatonga be dia be ny olana, dia aza adino ny miborosy azy ireo.
Ialao ny zava-pisotro sy voankazo maizina foana ny fotsy nify. Misy zava-pisotro, toy ny divay mena sy ny kafe, Afaka miala stains amin'ny nify. Raha toa ka tsy afaka manome fotsiny ny zava-pisotro ireo, sip ny alalan 'ny mololo mba hialana ny staining vokany.
SOSO-KEVITRA! Mba mahafotsy ny nify dia afaka fotsiny miborosy azy ireo amin'ny peroxyde Mametaka sy ny mofo soda. Samy ireo zavatra ireo sakafo ara-barotra indrindra ao Whitening toothpastes, kanefa izy ireo dia hita ao amin'ny pantry ao an-trano.
Ireo akora mety lalina stains ao amin'ny nify. Raha tsy maintsy misotro kafe na dite, dia afaka mampiasa ny mololo ny misotro azy ireo, miborosy nify rehefa vita ny kapoaka, na borosy nify avy hatrany araka ny zava-pisotro vita. Misotro dite sy kafe, miaraka amin'ny fifohana sigara, no lehibe ny olona mpandray anjara amin'ny discoloring nifin'ny.
Mampiasà fanafody voajanahary ny mahafotsy ny nify, toy ny paoma cider vinaingitra. Izany naseho hanaisotra stains sy hanafoana ny bakteria ao amin'ny olona am-bavany. Mba hahombiazana amin'ny fitsaboana, gargle isan'andro ny vinaingitra, maraina dia tsaratsara kokoa, avy eo dia manaraka izany miaraka amin'ny nify miborosy.
SOSO-KEVITRA! Fidio ny tsara borosy nify. Mitenena amin'ny mpitsabo nify mba hahazoana ny na ny torohevitra eo amin'ny borosy nify inona no tokony hifantina.
Misy nify voajanahary whiteners mba ho afaka hahita fa tsy any an-tokotany ny mividy azy ireo, dia toy izany no mamonjy anao vola. Ny hodi-kazo ny Walnut hazo dia tsara ampiasaina mahafotsy fitsaboana nify. Mahazoa hodi-kazo avy amin'ny hazo, hosasany ny tsara sy hamafàny ny nify izany. Izany miasa mba hanesorana stains sy ny takela-pahatsiarovana.
Tokony ho fantatrao fa misy ny vahaolana Whitening voajanahary ihany no mahafotsy nify. Raha manana veneers, toy ny satro-boninahitra, dia nahafeno, veneers na hafa karazana asa nify eo anoloana anoloan'ny nify, dia hitoetra mitovy loko. Whitening voajanahary mety nify nify asa izay efa natao mitranitrany avy be.
Hevitra ny mpahaimanitsinify na mpitsabo nify alohan'ny misafidy ny mahafotsy ny nify. Aza manomboka Whitening ny nify, raha tsy maintsy manao hafa olana.
Ny mpifoka sigara dia mora ny mamantatra satria ireo mavo stains eo amin'ny nify. Mety ho sarotra foana fa fotsy tsiky raha mifoka. Raha toa tsy maintsy hifoka sigara, ianao no tokony hanapaka indray noho ny ara-pahasalamana sy ny endriky ny nify.
Ampiasao ny volomboasary ny anatiny Peel lafiny tokony hahosotra stains sy manao ny nify fotsy. Azonao atao ihany koa ny afangaro maina peels Orange sy ny tany Bay miala mba hanao manitra toothpaste.Make azo antoka ny hosasany ny vavanao rehefa mahavita fanilihana ny hanaisotra ny fanampiny rehetra voankazo siramamy.
Alaviro miloko mouthwashes rehefa misy koa colors.Mouthwashes misy loko mba hametraka loko mety tsy ilaina discoloration hiseho amin'ny nify.
Miborosy ny nify dia tsara miaro fepetra. Afaka mahazo ny sasany foana toothpaste manokana natao mba mahafotsy ny nify. Misy isan-karazany be dia be ny karazana, fikarohana azy ireo izany dia afaka manampy anao hahita izay miasa ho an'ny nify.
Andramo fanatsarana ny fofonaina hahazo fotsy tsiky. Izahao toetra ny fofonain'ny amin'ny licking madio ampahany amin'ny tananao. Raha afaka manimbolo ny rora, mampiasa ny mint na ny miborosy nify. Raha handeha hiaraka miborosy nify, azo antoka fa toaka-malalaka mba tsy namaoka ny vavanao.
Whitening nify Miteraka tena ny fifanakalozan-kevitra. Antenaina fa rehefa avy mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia hahatsapa fa matoky kokoa ny fampiharana ny sasany amin'ireo hevitra aseho ho Whitening nify. Ampiasao ity fanazavana mba soa aman-tsara hanatsarana ny nify loko.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra - Inona ny hevitrao?
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 12:56 AM
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: mandray stains, Hanazava ny Smile, Dental cleanings, Laser Whitening nify, nify care, fotsy nify, fotsy nify Soso-kevitra, mahafotsy ny nify, fotsy tsiky
Matoky ao amin'ny Smile sy White Teeth
Torohevitra mandaitra rehefa te-mahafotsy ny nifinao
Whitening Teeth Tips Afaka Andramo Out ankehitriny!
Esory fa Yellow Grin Ary Get A Bright White Smile
Ataovy ny Smile Dazzle amin'ireo Tips
mandray stains Leviora beauty tsiky fomba tsara indrindra mahafotsy nify Hanazava ny Smile famirapiratana ny ny tsikinao Bright White Smile Dazzle Smile Dental cleanings mpitsabo nify ny efi Get A Bright White Smile an-trano nify Whitening an-trano Whitening ny fomba mahafotsy nify ny fomba mahafotsy ny nify tamin'ny laser nify Whitening Laser Whitening nify voajanahary fomba mahafotsy nify Esory Discoloration Esory Teeth Stains Smile Dazzle frezy nify bleaching maika nify mamiratra nify care nify salama nify Stains nify Whitening nify mavo Soso-kevitra Nahasakana Nify Stains toothpaste Nify Whitening entana vitamina C Whitening Teeth Tips Afaka Andramo Out ankehitriny! Whitening ny nify mahafotsy ny nify mahafotsy nify mahafotsy nify ao an-trano mahafotsy ny nify Mahafotsy ny nify Easy fotsy tsiky fotsy mamirapiratra nify fotsy nify fotsy nify Soso-kevitra Yellow Grin
WordPress Theme avy HeatMapTheme.com